ချစ်သူကောင်မလေး ကို တကယ် ချစ်မှအောက် ကစာတွေ ဆက် ဖတ် ပါ – Shwewiki.com
ချစ်သူကောင်မလေး ကို တကယ် ချစ်မှအောက် ကစာတွေ ဆက် ဖတ် ပါ
ချစ် သူကောင်မလေးကို တကယ်ချစ်မှအောက်ကစာတွေ ဆက်ဖတ်ပါ
ခံစားလွယ်တာမိန်းကလေးတွေပါ ချစ်သူတွေဆိုရင်ပိုတောင်ခံစားလွယ်တယ် ဘာအကြောင်းရှိရှိ မအော်ပါနဲ့ စကားနဲ့ပဲပြောပါ သူတို့ပဲအော်ပါစေ
မိဘတွေကတောင် မရိုက်ရက်တဲ့နုနယ်တဲ့မိန်းကလေးပါ ရိုက်ဖို့နေနေသာသာ အော်တာတောင်လွန်လှပီ သူ့မိဘထက် မင်းကပိုကောင်းအောင်ထားနိုင်ရင်တောင် လက်ပါဖို့အခွင့်အရေးမရှိဖူး ( ခုတလောမိန်းကလေးတွေကပဲလက်ပါနေသလိုပဲ )
အလိုလိုက်ပါ. အလျှော့ပေးပါ. သည်းခံပါ
သူမကိုအလျှော့ပေးတာက ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာ အလုပ်နဲ့သက်သေပြတဲ့သဘောပါပဲ ချစ်သူဘဝမှာတောင်အလျှော့မပေးနိုင်ရင် လက်ထပ်ပီးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ငါ့ချစ်သူက ငါ့ကိုဘယ်လောက်အလျှော့ပေးတယ် ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုပီး သူငယ်ချင်းတွေကိုကြွားချင်တာလည်းမိန်းကလေးတွေပါပဲ သူမကိုကြွားခွင့်ရအောင် လုပ်ပေးလိုက်ပါ
သူမစိတ်ကောက်တယ်ဆိုတာ မင်းသူမအပေါ် ချစ်တာသိလို့ပါ အပြင်ပန်းကစိတ်ဆိုးချင်ယောင်ဆောင်နေပေမယ့် စိတ်ထဲက မင်းချော့တာလေးတွေကိုကြည်နူးနေတာပါ။
သူမရစ်တာ မင်းကို စိတ်ပူလို့တစ်ဝက်ပါတယ်ဆိုတာ သိထားပါ သူမရစ်တာလေးတောင်သည်းမခံနိုင်ရင်ဘယ်လိုအာမခံချက်နဲ့မင်းကိုလက်ထပ်နိုင်မှာလဲ ချစ်လို့ရစ်တယ် တွေးပေးလိုက်ပါ ( မိန်းကလေးကလည်းသိပ်မရစ်နဲ့ပေါ့ စိတ်ညစ်ပင်ပန်းနေတုန်းသွားရစ်ရင် လူသတ်မှုတွေဖြစ်ကုန်မယ် )
ချစ်သူထားတာ တစ်ဘဝလုံးပျော်ရွှင်ရဖို့ပါ သူမကို ပျော်အောင်မထားနိုင်သေးရင်တောင် ဘာအကြောင်းကြောင်းနဲ့မှ မငိုပါစေနဲ့
သူမ ပူဆာတယ်ဆိုတာ သူမအပေါ် မင်းအလိုလိုက်မှန်းသိလို့ နွဲ့ဆိုးဆိုးတာပါ တတ်နိုင်သလောက်လိုက်လုပ်ပေးပါ မိန်းကလေးကလည်း ကိုယ့်ကောင်လေးမတတ်နိုင်တာတွေသိပ်မပူဆာနဲ့ပေါ့ ချစ်တာနဲ့ ရယူတာတခြားစီပါ.မတော်တဆမင်းနဲ့ကွဲသွားခဲ့ရင် သူမရဲ့အိမ်ထောင်ရေးမှာ မင်းရယူခဲ့တာကအမည်းစက်ဖြစ်သွားမှာပဲ..မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားပါ။
အဲ့ဒါလေးတွေ လိုက်လုပ်နိုင်ရင်ကို တော်တော်ပြည့်စုံနေပါပီ
ခဈြ သူကောငျမလေးကို တကယျခဈြမှအောကျကစာတှေ ဆကျဖတျပါ
ခံစားလှယျတာမိနျးကလေးတှပေါ ခဈြသူတှဆေိုရငျပိုတောငျခံစားလှယျတယျ ဘာအကွောငျးရှိရှိ မအျောပါနဲ့ စကားနဲ့ပဲပွောပါ သူတို့ပဲအျောပါစေ
မိဘတှကေတောငျ မရိုကျရကျတဲ့နုနယျတဲ့မိနျးကလေးပါ ရိုကျဖို့နနေသောသာ အျောတာတောငျလှနျလှပီ သူ့မိဘထကျ မငျးကပိုကောငျးအောငျထားနိုငျရငျတောငျ လကျပါဖို့အခှငျ့အရေးမရှိဖူး ( ခုတလောမိနျးကလေးတှကေပဲလကျပါနသေလိုပဲ )
အလိုလိုကျပါ. အလြှော့ပေးပါ. သညျးခံပါ
သူမကိုအလြှော့ပေးတာက ဘယျလောကျခဈြလဲဆိုတာ အလုပျနဲ့သကျသပွေတဲ့သဘောပါပဲ ခဈြသူဘဝမှာတောငျအလြှော့မပေးနိုငျရငျ လကျထပျပီးရငျဘယျလိုလုပျမလဲ? ငါ့ခဈြသူက ငါ့ကိုဘယျလောကျအလြှော့ပေးတယျ ဘယျလောကျခဈြတယျဆိုပီး သူငယျခငျြးတှကေိုကွှားခငျြတာလညျးမိနျးကလေးတှပေါပဲ သူမကိုကွှားခှငျ့ရအောငျ လုပျပေးလိုကျပါ
သူမစိတျကောကျတယျဆိုတာ မငျးသူမအပျေါ ခဈြတာသိလို့ပါ အပွငျပနျးကစိတျဆိုးခငျြယောငျဆောငျနပေမေယျ့ စိတျထဲက မငျးခြော့တာလေးတှကေိုကွညျနူးနတောပါ။
သူမရဈတာ မငျးကို စိတျပူလို့တဈဝကျပါတယျဆိုတာ သိထားပါ သူမရဈတာလေးတောငျသညျးမခံနိုငျရငျဘယျလိုအာမခံခကျြနဲ့မငျးကိုလကျထပျနိုငျမှာလဲ ခဈြလို့ရဈတယျ တှေးပေးလိုကျပါ ( မိနျးကလေးကလညျးသိပျမရဈနဲ့ပေါ့ စိတျညဈပငျပနျးနတေုနျးသှားရဈရငျ လူသတျမှုတှဖွေဈကုနျမယျ )
ခဈြသူထားတာ တဈဘဝလုံးပြျောရှငျရဖို့ပါ သူမကို ပြျောအောငျမထားနိုငျသေးရငျတောငျ ဘာအကွောငျးကွောငျးနဲ့မှ မငိုပါစနေဲ့
သူမ ပူဆာတယျဆိုတာ သူမအပျေါ မငျးအလိုလိုကျမှနျးသိလို့ နှဲ့ဆိုးဆိုးတာပါ တတျနိုငျသလောကျလိုကျလုပျပေးပါ မိနျးကလေးကလညျး ကိုယျ့ကောငျလေးမတတျနိုငျတာတှသေိပျမပူဆာနဲ့ပေါ့ ခဈြတာနဲ့ ရယူတာတခွားစီပါ.မတျောတဆမငျးနဲ့ကှဲသှားခဲ့ရငျ သူမရဲ့အိမျထောငျရေးမှာ မငျးရယူခဲ့တာကအမညျးစကျဖွဈသှားမှာပဲ..မွတျနိုးတနျဖိုးထားပါ။
အဲ့ဒါလေးတှေ လိုကျလုပျနိုငျရငျကို တျောတျောပွညျ့စုံနပေါပီ